सर्पको टोकाइबाट ६ जनाको मृत्यु - inaruwaonline.com
सर्पको टोकाइबाट ६ जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २३, २०७३ समय: १३:०२:०८
२३ भदौं, दिलिप साह सप्तरी । दुई महिनाको अवधिमा बुधबारसम्म सर्पको टोकाईबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । बुधबार सम्ममा सर्पको टोकाइबाट विरामी हुनेको संख्या १ सय ७ पुगेको छ । सर्पको टोकाईबाट पीडित भएर आउनेको संख्या प्रत्येक दिन एक देखि ६ जनासम्म हुने गरेको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको रेकर्ड शाखाले जनाएको छ । भाद्र महिनामा मात्र उक्त अस्पतालमा सर्पको टोकाइबाट पीडित भएर उपचारका लागि आउनेको संख्या ५७ पुगेको छ ।
त्यस्तै सप्तरी जिल्लामा रहेको विभिन्न स्वास्थ्य चौकी र प्राइभेट क्लीनिकमा पनि सर्पको टोकाइबाट पीडित भई दैनिक १ सय ३ जनासम्म आउने गरेको बुझिएको छ ।वर्षा नहुँदा कमै मात्र सर्पको टोकाइबाट पीडित हुने गरेकोमा वर्षा र अत्यधिक गर्मीसँगै सर्पदंशको घटना ह्वात्तै बढेको पीडितहरुको भनाई छ ।सर्पदंशका घटनामा बृद्धि भई विरामीको चाप बढेपछि बेडको अभावमा भुईमै राखेर भएपनि उपचार ब्यवस्था मिलाइएको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका डा. बृजेशकुमार झाले बताउनुभयो ।
सर्पको टोकाइका विरामी जिल्लाभरीका भए पनि जंगलछेउ बसोवास गर्ने तथा माटाका साना–साना घरमा बस्ने ब्यक्ति बढी पीडित भएको पाइएको चिकित्सकहरूको भनाई छ ।अस्पताल श्रोतका अनुसार अर्नाहा, बथनाहा, शम्भुनाथ, परसाही, पिप्रापश्चिम, बसवलपुर, रम्पुरा मल्हनियाँ, त्रिकौल, प्रसवनी लगायतका गाविसका सर्पले डसेका ब्यक्तिहरुबढी उपचारका लागि आएका छन् ।
सर्पदंशको घटना हवात्तै बढेपछि सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग गरिने एन्टीस्नेक भ्यानम तथा अन्य औषधी प्रयाप्त मात्रामा झिकाईएको वताएका डा. झाले बेडको अभावमा भुईमा राखेर भएपनि सर्पदंशका पीडितलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । विज्ञहरुका अनुसार सर्पको डसाई असारदेखि बढ्दै गएर भदौ महिनामा सबभन्दा उच्च हुँदै मंसिरसम्म रहन्छ ।